Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra mitazona andriamby - Factory Factory System an'ny Magnetic Holding
Ity tifitra basy mahery vaika ity dia mety amin'ny basim-borona, basy lava, basy poleta, revolver, basy, ary basin'ny marika rehetra hanafenana azy ao amin'ny fiarovana an-trano na fiara, na fampisehoana. Mora be ny mametraka azy ka azonao apetraka na aiza na aiza tsy misy manahirana!
Mount Magnetic Gun miaraka amin'ny fonosana vita amin'ny fingotra
Ity tifitra basy mahery vaika ity dia mety amin'ny basim-borona, basy lava, basy poleta, revolver, basy, ary basin'ny marika rehetra hanafenana azy ao amin'ny fiarovana an-trano na fiara, na fampisehoana. Hita eto ny fanontana logo anao ambony.
Fefy vita amin'ny andriamby vita amin'ny mavo ho an'ny fiara LED
Ity fonosana mitaingina andriamby ity dia natao ho an'ny tafo fiara mitazona jiro sy fametrahana toerana. Ny fonosana vita amin'ny plastika dia miaro ny sary hosodoko amin'ny fahasimbana.
Vatokely vita amin'ny vovoka miaraka amin'ny tahony
Ny magnet Neodymium matanjaka dia ampiarahina amin'ny pataloha fingotra avo lenta, izay manome antoka ny fifandraisana azo antoka rehefa ampidirinao amin'ny gropy ny marika andriamby sns Namboarina miaraka amina lava lava miorina eo an-tampony, manome tombony fanampiny ho an'ny mpampiasa rehefa mametraka vinyl marefo matetika izy ireo. haino aman-jery.
Rectangluar Miorina mitazona fingotra
Ireo andriamby vita amin'ny kodiarana mahitsizoro ireo dia andriamby mahery vaika miaraka amina kofehy anatiny iray na roa. Ny andriamby vita amin'ny fingotra dia novokarina tamin'ny fitaovana avo lenta ka niantoka vokatra matanjaka sy maharitra. Ny andriamby fingotra misy kofehy roa dia novokarina tamin'ny kilasy N48 ho an'ny tanjaka fanampiny
Vatokely misy varahina miaraka amin'ny kofehy ivelany
Ity andriamby vilany vita amin'ny kodiarana ity dia mety indrindra amin'ny zavatra namboarina tamina andriamby tamin'ny alàlan'ny kofehy ivelany toy ny fampirantiana dokam-barotra na fipetrahana fiarovana amin'ny tafo fiara. Ny fingotra ivelany dia afaka miaro ao anaty andriamby amin'ny fahasimbana sy ny harafesina.